5 Su'aalaha Beyoncé — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Iyadoo taas maskaxda, haddii aan fursad u helay inuu la kulmo lahaa iyada kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha laga yaabo in wax baan ku weyddiisanayaa, qaar ka mid ah oo aan weli ka shaqeeya naftayda marayo.
1. Sidee saameynta kula tahay in aad music waa in nolosha iyo qiyamka dadka dhallinyarada ah?
2. Music waa nooc ka mid qurux badan is muujinta, halkaas oo aanu fursad u leeyihiin inay shubo dareenkooda noo, fikirrada, iyo damacyadii. Laakiin malaayiin qof music sidoo kale waxay u adeegtaa sida soundtrack si ay noloshooda, oo waxaa Sawira views adduunkooda. Sidee ayaad isugu dheelitiri hadal is iyo masuuliyadda aad leedahay sida influencer ah?
3. Ma u malaynaysaa in dareenka aad ka dhaansado si aad u qurux gaar ah iyo galmada (taas oo inta badan ka Shuqlinayn aad tahay) horjeedda fariinta in songs sida, "Pretty dhaawacdaa?” In song in, waxaad u muuqdaan in ay la dhiiri haweenka dhallinyarada ah ma in ay naftooda dilaan doonaya kaamil ah, iyo in ay diiradda saaraan Naftooda dhoolo ay halkii. Laakiin ma kula tahay ku tiil joogta ah caadiga ah ee taas beauty- our aad si cad u shuqullada kulamada ka dhanka ah farriinta in?
4. Ma jiraa hab si ay ugu dabaal galmo xaas oo aan si cad u dhexdhexaadka ka mid ah galmada u gaar ah iyo kuwa kale oo jirrabaya in damaca?
5. Waa maxay sababta Jay-Z afartameeyaha uu laakiin weli qabow oo aan aniga ahayn?
Kuwani waa uun dhawr ka mid ah su'aalaha ay u yimaadeen inay u fikiraan xalay. aad guys Ma fikirrada kasta?
Araan Rafael • January 29, 2014 at 11:12 waxaan ahay • Reply
Chris • January 29, 2014 at 11:13 waxaan ahay • Reply
Bro Thanks for isagoo masuul ka filan in aan weerar saaray. posts Sidaas badan oo aan soo arkay ka Masiixiyiinta ayaa si xanaaq iyo in la maleegey.
Tani waa fiican in aad aragto. Masiixiyiinta ah kuwaas oo aadan kaliya iska indha dhibaatooyin ama kaliya oo dhan soo baxay dadka weerarka qeylin “Bixiddaada cadaabta.” Just cadhaysiin in aad eegtid wanaagsan ee waxa ay u qirayaa iyo sida ay u dhaqmaan. #CauseSomethingSureAintAddingUp ku mahadsan tahay in aad safar
Broc • January 29, 2014 at 11:14 waxaan ahay • Reply
Waxaan iyada u weydiin lahaa iyada iyo ka qaybgalka ninkeeda la Illuminati ku saabsan. Laakiin #5 i diidanaa land
Julia • January 29, 2014 at 11:15 waxaan ahay • Reply
Waan jeclahay sida su'aalaha la warinayaa. Iyadu waa mid aad wax raadayn kara in dhammaan gabdhaha kuwa kaliya ma ahan dhalinyarada iyo waxay tahay inay tahay mid aad u tayo leh. Laakiin anigu waxaan oggolahay, mararka qaarkood iyada tayo waxaa hadhaysay by iyada cayaar ama la'aanta dharka.
Andrew land Ross • January 29, 2014 at 11:17 waxaan ahay • Reply
Waxaan jeclaa sida aad duniyooyinka wax walba oo aad ku tidhi hab jecel laakiin wax dhisid ah. Beyonce & entertainers kale waa in booska ugu fiican in lagu daydo waayo yaraantayadii laakiin aqlabiyad dhici gaaban awooddooda oo buuxda. Waa in aan sii tukanayay iyaga u. Rajaynaynaa oo dhan waa nin si fiican u. Ka dhig wax samaynaya, waayo, boqortooyada!
JasmineArogundade • January 29, 2014 at 11:19 waxaan ahay • Reply
Waxaan u maleynayaa in uu ahaa hab aad u wanaagsan in weedha su'aalo kuwa. My version ka mid ah ayaa laga yaabaa in weerar yara kaadida lol. Waad ku mahadsan tahay isagoo tusaale & Waxa kale oo ka shaqeeya maalin kasta si uu u furo dadyowga’ xusuusanayn Masiix / xukumay
Debbi • January 29, 2014 at 11:22 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay this.
Waqtiyadii hore • January 29, 2014 at 11:25 waxaan ahay • Reply
LOL @ #5. laakiin haddii kale, su'aalo baddasheen, waayo, qof kasta iyo qof kasta ee ama aamadani in industry music ah.
JonReagan • January 29, 2014 at 11:25 waxaan ahay • Reply
Waxaan u maleeyay in kuwa wanaagsanayn iyo malaha u maleeyeen xanaajin, laakiin xusuusnow, waa u xoogga Ilaah xagga badbaadinta. Waxaan jeclaan lahaa Injiilka saafi ah in lagu soo bandhigo iyada oo aynu Ruuxa Quduuska ah iyada tusi qaladka jidadkeeda u ah sida ay leedahay waayo, dhammaan oo naga mid ah. Haddii kale, Anigu garan maayo sababta ay daryeeli lahaa in la beddelo. By habka, aad tahay hab qabow badan JayZ. Way meeldhexaadka ah!
Olivia • January 29, 2014 at 11:56 waxaan ahay • Reply
Waxaan labaad- Way meeldhexaadka ah! :-)
Leila. Bailey • January 29, 2014 at 11:27 waxaan ahay • Reply
Kuwani waa su'aalaha waaweyn oo dhan!!!!!!
#5 in kastoo.. lol
JesiliaRose • January 29, 2014 at 11:29 waxaan ahay • Reply
Kuwani waa su'aalaha fiican safarka Lee. Ka fikir waxa ku saabsan waqtiga aan joojiyo xaq iyada music gaar ahaan dadka Masiixiyiinta ah kuwa dhageysta iyada alaabtii. Tani waa weyn!
P.S. My doone yiri “nah, aad tahay qabow badan Jay-Z.” :) Ilaahay ha barakeeyo aad Bro.
Michelle • January 29, 2014 at 11:29 waxaan ahay • Reply
Waxaan mar walba jeclaa Beyoncé. Waxay u qurux badan oo tayo leh. Waxa kale oo aan qoto dheer ahay galay xiriirka aan la Ilaah. Inkasta oo aan marwada this jecel, Waxaan mar dambe ma ay dhegaysan iyada music sababtoo ah waxaan u leeyihiin nooca saxda ah oo isku mid ah dareen su'aalaha aad soo bandhigeen. Waxaan rajaynayaa in aad hesho fursad si aan u waydiiyo kuwaas sababtoo ah waxaan jeclaan lahaa in aan maqlo jawaabo iyada oo aan arko sida ay qiimeeyaan nolosheeda. Waxaan leeyahay caddaalad la arag; Kaliya waxaan la yaabanahay waxa ku dhacey ee nolosheeda. Waad ku mahadsan tahay this.
Frank Gil • January 29, 2014 at 11:31 waxaan ahay • Reply
su'aasha in la soo dhaafay in kastoo.
liiska Great. Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo jawaab #3. Trip Awesome!
Justin • January 29, 2014 at 11:34 waxaan ahay • Reply
Waan jeclahay su'aalahan. Waxaad samayn shaqo wayn u qeexaan in su'aalo dhab ah in qaar badan oo naga mid ah waxay leeyihiin iyada in aad u wanaagsan looga fakaray, iyo hab daryeel. Waxaad tahay waxyi ah aniga iyo kuwo kale oo badan si ay u. Waxaan rajeyneynaa in aad blog taabto qof (Waan ogahay in ay Doono). Bal yaa og, waxaa laga yaabaa in Doono Beyonce Wasiirka!
Zaeria • January 29, 2014 at 11:36 waxaan ahay • Reply
Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado, waxa ama haddii ay jiraan xuduudaha ayaa si shakhsi ah loo dhigay masuuliyadaada saamaynta on jiilka maanta. Haddii ay sidaas tahay, sidee baad u qaban? Haddii aadan, sababta? (nooca qasacadii taageeray su'aasha #2)
SusanBonnerDunston • January 29, 2014 at 11:40 waxaan ahay • Reply
Wax wanaagsan baad tidhi Trip! Waan ogaa inaad jiray nin run dhallinyarada ahaa Ilaah markii aan marka hore aad ku maqlay ee ku North Carolina
Olivia • January 29, 2014 at 11:43 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay post. Waxaan dhawaan yimid ee guud ahaan video ah in uu sharaxayaa badan oo iyada ku saabsan, la “iyada” u sheegay of iyada oo hanti (Sasha culus) iyo sida iyadu qoob on stage. Waxaan bilaabay daawashada Grammy ee carruurtayda iyo markii ay bilowday inay cayaaray ayaa i baryay in la beddelo saldhigga. Markii aan posted info this on site kale si fudud u sheegaya waxaan u baahan nahay in ay ka taxadartaa waxa caruurteena u arkaan iyo cidda ay u bogi, Waxaan ruffled badan oo baadad. Waxaan aad sidaa yeeli jidka khiyaano cadowga isticmaalaa dadka by, meelaha iyo waxyaabaha ilaa aan mararka qaar u iman off adag. Ma doonayo in iyo aniga ayaa wali barashada. Tani waa arrin aad si fiican uga dhigay walaalkay.
Timothy Brown • January 29, 2014 at 11:43 waxaan ahay • Reply
Waxaad sheegay in aad tahay Christian a Marar badan, samayn aad dareento in music aad soo saaro waa matalaad ah Masiixa idinku jira.
Rhionah • January 31, 2014 at 5:08 waxaan ahay • Reply
Waxaan si aad u la ahay on this hal gabar.
Tiheasha • January 29, 2014 at 11:43 waxaan ahay • Reply
Aamiin, waad ku mahadsan tahay this! Anigu waxaan is silcin by aniga ii gaar ah “qoyska” taasoo la micno ah walaaluhu in Masiix… waayo iska dhigaya su'aalaha iyo walaac la mid ah in aan article soo dhaafay ku saabsan Beyoncé. Si kastaba ha ahaatee waxaan kaliya ku baryayaaye, in Ilaah ammaaneen aan loo eegayn waxa.
Cindy • January 29, 2014 at 11:48 waxaan ahay • Reply
Wax wanaagsan baad tidhi ama la weydiiyay, fiican weli.
Ruthie • January 29, 2014 at 11:49 waxaan ahay • Reply
Jacaylka su'aalaha adag. Waxaan arkay adiga iyo Jay-Z labada, oo waxaan kaa baryayaa in kala duwan. Sii wad in aad noqon tusaale ahaan. ka dib ha ku eegto! Iska fiiri Up! Ha nolosha Ilaah ammaana! Waxaad iyo caawimo Cross Movement kicin kids aan. Waxaan weligiis kuwo Mahadin.
Allen • January 29, 2014 at 11:49 waxaan ahay • Reply
Waxaan rumaysan in su'aalahan waxaa ka jawaabi doono hal maalin Beyoncé nafteeda. Waan jeclahay sida ay u warinayaa iyo si qoto dheer ee gaadhsiiya xudunta u ah sabab ah in “maxaad”
Alexis • January 29, 2014 at 11:52 waxaan ahay • Reply
Beyonce laga yaabaa ama ma iman karaan guud ahaan this post, su'aalahan, ama aad inta aad nooshahay. Waxaan aadka shaki iyadu waa inay jawaabtaa lahaa su'aalahan ama daryeel si ay u. Xaqiiqada ah in su'aalaha u baahan in la weydiiyo waxa laga yaabaa in qaar ka mid ah seylaanyenta khilaaf in ay ama ma dareemi kartaa laga yaabaa in sida wax ka qabashada.
Waxa kaliya laga yaabaa in loo tixgeliyo tahay sare, laakiin waxaan qabaa ay timaado mas'uulna ka weyn. Qof ka mid ah iyada oo caan ah ayaa la dhisay iyada mustaqbalkiisa on burinaya kuwaas, oo ay sii wadaan in ay iyada riixay. Waxaan qabaa waxaa jira rajo in su'aalaha, in ay go'aan ku gaadhi kartaa in aad ka fikirto oo ku saabsan. Waxaan rajeynayaa ayay doonaa n meel mar ka mid ah noloshiisa in ay iyaga ka fiirsan. Waan ku faraxsanahay waxa la weydiiyey.
Nicky • January 29, 2014 at 11:55 waxaan ahay • Reply
Waxaan jeclaan su'aalahaaga. Iyagu ma ay handadaad iyo ku fikiray ay iska xanaajin. Waxaan ku ogaaday in entertainer ah waa ku adag tahay iyo in ay naftooda ku leeyihiin meel ka baxsan ifinaya. Waxaan la yaabanahay waxay ogaadaan in sababta oo ah meel ay mar walba yihiin ifinaya. artist badan oo sababeeyaan shaqada by leh in ay tahay “madadaalada kaliya.” Waxaan doonayaa in aan lahaa in la ogaado iyada oo meesha ma ka “waa madadaalo kaliya” dhamaadka? Sidoo kale, in lagu daydo uusan iyadu ay ogaadaan in ay tahay xisaabtamo dhaawaca in iyada music sameeya(iyadu si firfircoon uga aqbalay booskaas adigoo booqanaya dugsiyada iyo la hadalka carruurta)?
su'aalaha waa kuwa wadarta unahay fikirrada Mu'miniinta; Mu'miniinta ah sii aan warka badan oo ka mid ah questionables kuwa upkiisa. Waxaan qabaa in sidoo kale marar badan, Annagu waxaannu nahay deg deg ah u soo jiidi u Samreen wixii of farshaxano kale ama dadka guud oo aan og nahay dareenka aan soo socda oo kaliya sida xukumeen laakiin sidoo kale xukun… Waayo, bal yaa aynu nahay???. Laakiin su'aalahan ma mid kasoo horjeeda. Haddii Beyonce ahaayeen in ay ka jawaabaan su'aalahan, ayay, nafteeda, lahaa waxaan aaminsanahay in la shaki ku jirin, waxay bilaabeen inay arkaan wixii aannu oo dhan waad aragteen; si fudud by jawaabista su'aalaha.
Awesome iyo kaftan ah (su'aasha ku saabsan J.Z) :)
waan ka soo horjeedaa. Waxaad tahay qabow badan Jay Z …idin baro oo loo Waxyoodo ahayn raggii dhallinyarada ahaa oo aad dhegaysato music inay si fiican u noqon…ku nool ka fiican…jeclahay Ciise….jecel qoyskooda iyo koraan in raggii reer caadiga ah noqon…hadda hooba leh qabow. Beyonce waa u qurux badan oo uu leeyahay tayo iyada song si kastaba ha ahaatee in uu….”Waxaan laga yaabaa in dhalinyarada laakiin dhaqsaha badan diyaar u ah”….dhiiri gabdhaha yar yar in ay ku ridin damaca iyo galmo ka baxsan ama guurka… my 13 walaasha waxaa it..smh gabyaya. Maxaad dhiiri dembi?
Wow tani waa mid laga cabsado Waxaan rajaynayaa in aad ka hesho in fannaaniinta safar fursad u baahan tahay fanaaniinta aad sida in ay qaabeeyaan tilmaamaha ay kastoo Waxaan ku tirinayaa haddii su'aalaha oo dhan ayaa dhab ahaantii la weydiiyay ayay ku farxi lahaa haddii kale waxaa wanaagsan u maleeyay in su'aalaha oo dhan kuwa taam u dhan fanaaniinta waxaa la mid ah ee Beyonce.
Waan jeclaaday safar this. #5 lahaa i diidanaa. Laakiinse kuwanu yihiin su'aalo ku xanaajiyey fikirka weyn. Oo artist labada cilmaani iyo kitaabiga ah baahi loo qabo in themseleves weydiin mar kasta waxay ku xidheen taabtana dhameysatay on track a.
Waxaa laga yaabaa ayay arki doonaa tan iyo ka jawaab kuu :)
Trip – su'aalo Awesome, oo si fiican u duniyooyinka, Bro! Waxaan ku dhowaad lahaa in ay kor u taagan iyo ka tago qolka fadhiga sida Natalie Grant sameeyey show ah. Waxaan daawaday show ah sababtoo ah kaliya aan 13 sanadkii ina jir doonayay in, oo waxaan doonayay inaan arko waxa meesha ka socda dunida oo cilmaani ah music, sidii aan soco baxay qaybta ugu 10 sano ka hor. Waxaa jiray 2 qaab in uu sheegtay, “Oh, in aan macaanka!” – Robin Thicke ka dibna Pharrell. Waxaan u lahaa in wiilkayga weydii haddii uu ku ogaa waxa songs kuwa ahaayeen xataa ku saabsan, wuxuu sheegay in uu ogaa laakiin ma ii sheegi lahayd (galmada iyo dumarka objectifying.) Sidaas daraaddeed waxaa waa soohdinta dhanka waddada tooska ah u songs dhaddig. Beyonce iyo qaar ka mid ah fannaaniinta dhaddig’ songs keeni haweenka muujiyaan dareenkooda galmo iyo markaas objectified. Waa wareegga daran ee dembiga, jidkuna kids badan oo waalidiinta in aadan daryeeli ku saabsan kasta oo kale oo, maxaa yeelay, xiriirka ahaa mid ku salaysan damaca… Anyway, Waxaan ku filan wacdiyey, shuqul wanaagsan, jeclaataan music! – J
Sug in kastoo… sida xumad aad kaliya xoqin #5 liiska this! LOL
Waxaan jeclaan lahaa in aan u waydiiyo sababta ay go'aansadeen in ay noqon oo gabayaa ahaa qabanayaan music Dhaw. Waan ogahay iyadu lahaa asalka ah Christian, laakiinse ma aha mid aan si fiican u. Waxay, sida qaar kale oo badan, waa in meel in ay door-daydo weyn laakiin doortay si ay xaq ugu noqon caanka ah halkii. Waan necbahay heerka aan maanta dhigay Americans, gaar ahaan dhallinyarada.
On qoraal fududee, jeclaataan music. Waxaad u baahan tahay in la sameeyo song kale la Jimmy Nedum…..ama wax kasta oo magiciisana waxaa la. lol! Su'aalo fiican oo tho.
Sidaas daraaddeed waxaan lahaa in la yidhaahdo waxaan ku akhriyey aan Trip fiican Lee cod….Anyways, kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha laga cabsado! Waxaan jeclaan lahaa inaan arko wareysi this!!
Ilaah ha idiin barakeeyo!!
Trip Lee! Waan ogahay laga yaabaa inaad hesho tan ah dadka hollering ya at laakiin waxaan doonayaa kaliya in la yidhaahdo noloshaada iyo music ayaa dhiirigelin weyn oo barako aan la Ciise lugaynta. On aad dood, Xaqiiqdii waan ku riyaaqay su'aalaha oo dhan. #4 xayiran ii soo baxa,. (oo kuwanu waa uun aragtidayda waxaan ogsoonahay in aan leeyahay cod yar) Waxaan aaminsanahay in ay jirto hab ay u dabaal nolosha guursaday. Oo sidii raacsane a Ciise, aan walaac noqon lahayd in rumaystayaasha ma Saarra lahaa ay galmada u gaar ah. Waa adag tahay inaan arko qalbiga Ciise’ in ka mid ah music / nolosha marka inta badan waqti aad aragto iyaga kuwa dhexdhexaadka ay galmada. Waxaa jira jacayl lahayn in. Just fursad jirrabaadda. waa in Mid ka mid ah ka fiirso sida ay u maamuusaan Sayidka iyo walaalahood la shaqayn jiray iyo sisters.But ka dibna mar kale, nooca in jacaylka iyada oo tixgelin ka timaada aragtida ah Christian.
Yess, Waan jeclahay su'aal #3!!! Its dhab ahaan waxa aan la mid aad u yaabsan!
Wax wanaagsan baad tidhi….waxaan leeyahay 1 ina iyo 3 gabdhaha iyo waxaan ahay soo faraxsanahay in aan u kiciyey iyagii si loo eego artist ah by midhaha shuqulladooda. Haddii waxa ay abuuri ma saf kartaa ilaa Erayga Ilaah. Ma rabtaa in aad in aad ruux quudinta? Waxaan qabaa inaad tahay SOCDO meeldhexaadka ah BADAN Jay-z.
Waxaad tahay SOCDO qabow badan Jay-Z! Interesting in aad maanta this posted. Waxaan soo B ee video, “Wax Best aan Marna Qabtay,” xalay on youtube, halka qaar ka mid ah iyada oo loo marayo 80 ee songs socday. (??!!) Waxa ay ku bilaabatay iyadoo lingerie cad, haddii aan xitaa u wici kartaa in. Qalbigaygu yeelin sidii aan daawaday! Waa si daran inuu arko & badan oo kale u qurux badan & fanaaniinta cajiib ah naftooda iibiyaan la galmada & bandhig ay galmada. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan haystaa si aad u weydiiso, Meeye nimankii noloshooda? Halkee waa aabbayaashood & nimankooda? Miyaanay ahayn in B aabihiis IYO Jay-Z noqon “dagaal” iyada oo dhan in ay yihiin? Miyaanay ahayn in ay iyada ilaalinta & iyada cisaynayo oo wax kasta oo iyaga oo ku? Waxaan noqon doonaa the first to sheegaya in haweenka u baahan tahay si ay u joojiyaan isu dhexdhexaadka, laakiin sidoo kale waxaan ka doodid doonaa in dad aan xoojinno si ay saxanka & bilaabi dumarka lagu maamuusayo. Aan abuuro bulsho halkaas oo haweenka waxaa loo dabaal & sharfay for Quruxdooda DAACAD & halkaas oo nin oo la ixtiraamo. Waan heli doonaa off saabuun aan sanduuqa hadda. :)
Wax wanaagsan baad tidhi…Waxaan u lahaa inaan ku waydiiyo su'aalo kuwa oo waxay khuseeyaan dhammaan na haddii aad tahay muusikiiste ama ma, kaliya nool aad qof nolosha waxaa had iyo jeer daawashada iyo qof ayaa sidoo kale ku yidhi waxaan doonayaa in aan noqdo sida in markii aan ku soo koray. Sidaas hubiyo in haddii aad si dhab ah u wac naftaada Masiix sida, waxaad samaynayso wax walba oo wakiil Masiix, hooba leh sababta aan rumaysan qaar ka mid ah dad badan oo dhalinyaro ah waa jahwareer, kii ay raaci doonaan. Waxaan rajeynayaa in ay Ciise Masiix iyo isaga oo kaliya, haddii kale waxaan sii wadi doonaa si ay u toosin yaamayska. Waxaan nahay oo dhan mas'uul ka noqdaan ficiladooda our, maxaa yeelay, falalka cod dheer yahay hadalka. fannaaniin kuwaas oo bilaabay in kaniisad inta badan dunida sababtoo ah ma taageero our music shaqayn jiray Christian. – jeclaan lahaa in aan maqlo jawaabaha iyada laakiin ka sii muhiimsan jeclaan lahaa iyada in ay dib u yimaadeen Ciise.
Jay -Z waa meel aan u dhow meeldhexaadka ah ka dibna Trip Lee!
Rajadii maalin maalmaha ka mid ayay u isticmaali doonaa iyada talanti oo Ilaah siiyey in meesha ugu horeysa….inay Rabbiga ammaanaan oo u ammaanaan isaga oo kaliya. Waxay caddeymaha In Rabbiga loo adeego iyo in loo isticmaalo uu Kingdom. Markaasaa Ibliisku wuxuu xaday iyada. Ilaah u ahaado mid gracefull iyadii.
First of dhan waan jeclahay aad Trip cod!!! codkaaga Haa lol iyo aad land! About su'aalaha waan jeclahay su'aal 4 iyo 5 waa qosol, aad Trip ma meeldhexaadka ah.. Waxaan qabaa adigu waad weyddiisan jacayl aad u badan iyo nimco iyo xigmad.. Shaqo wanaagsan.. Waxaana laga yaabaa in Ciise caawin ma ahan oo keliya Beyonce laakiin qaar badan oo naga mid ah sida Mu'miniinta.. Anigu mar dambe tho ha maqlina iyada music..
wax First waxa iyada baabuur-wadidda? Qofka waxaa laga sugayaa inay labada jidhkooda u dhali xaqnimo ama xaqdarro. Ma jirto baahi loo qabo in waxba jubbadda sonkorta. Waxaa jirta waddo in xaq u muuqdaan kuwo ku yidhi ninkii Laakiinse dhammaadkeedu waa dhimashada. Haa, waannu dembaabnay oo u baahan Badbaadiye, laakiin sida ay u dheer aan sii wadaan in ay hoos u waraabiyo farriimaha?? Ma aha in la mid ah kaniisadda Korintos kuwa Paul saxo? Runta waxa ay u baahan tahay in laguula hadlo.
su'aalahaaga celinayaan kuwa aan doonayay in iyada iyo sidoo weydii. Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo jawaabaha iyadii su'aalahan si xushmad leh daacad ah. Sidoo kale waxaan ku dari lahaa “Sidee aad lyrics toos ah aad ka tarjumaya qiimaha shakhsi?” iyo “Inta aad heeso cusub sarraysiin galmada, jidhkaaga iyo galmada. Ma loo arkaa in aad qoraal song in ammaanay Ilaaha ah oo aad ugu duceeyey Hadyadiina inay gabyaan oo la sooro?” Oo HAA!..aad tahay xaqiiqdii meeldhexaadka ah, lyricist a aad u fiican, iyo tusaale ah oo run ah “Life The Good”! Absolutely jeclaataan music!
ay safrayaan! Wax wanaagsan baad tidhi / weydiiyay, waxaana qabaa in ay waqtiga kaamil ah qofna ma'arkin arrimaha artistes saamaynta nolosha dhallinyarada iyo dhalinyarada waaweyn weligayo dheeraad ah u baahan su'aalo. Days dib, Waxaan maqlay a comment ka tuug caato ah kuwaas oo uu sheegay “kid kasta oo u dhaqmo on waxa uu sheegay in uu song lama si sax ah kiciyey” oo waxaan la mid ahaa neef whaaa?! Waxa uu sheegay in uu kaliya entertainer ah iyo in ay kor u kids waxa ay bartaan iyo waxaan ahay sida, “macallin iyo sidoo odhan kari waayeen,ay shaqadeyda inaan baro laakiin ardayda aan masuul ka tahay waxa ay baran?.” Its TOD kaliya waalan. Jeclaaday su'aal kasta sida aan bar jilicsan waayo Bey oo muddo dheer si aad u aragto iyada oo sidoo kale la badbaadiyey. Waxaan la this ka qabashada doonaa on my post soo socda si y'all u eegi kartaa ilaa on kruseaphix.wordpress.com
Tani waa xijiyaan wanaagsan; inoo furayay raacaynay ee wax badan waa caadi ahayn. Sida caadiga ah, madaxda u muuqdaan in ay heer kibirka iyo Fadilmo ka badan kuwa raacsan ay. Laakiin this post si qoto dheer in ay na dhiiri u muuqdaan in iimaanka Christian waa dhan oo ku saabsan adkaysasho. Waxaan jeclaan lahaa in aan noqon kartaa awoodo inuu dareenkiisa dhabta ah aan ah oo ku saabsan this post erayadayda, laakiin tani’ sida ugu dhow ee aan ka heli kartaa. Mahadsanid.
xaafuun, su'aalo wanaagsan. Runtii haka macnaheedu nothin haddii ay Jawaabaha ama ma dhibic waa u sameeyey ur dhibic. Yaa waa taageere oo kuweed ah oo waa in ku filan si ay u soo tilmaan u daryeeli iyada…anit safar buh trippin, kicitaanka ee jidka aad HOT in ay qabow aint Jay on ur horyaalka…
“Sayidow, aad wada hadalka u dhexeeya Trip iyo B dhab ah ka dhigi lahaa?”
Waan jeclahay.. iyo tirada 5 LOL
qoto dheer oo wanaagsan safar su'aasha.
Waxaan qabaa su'aalo waa ansax i haatan inta badan la yaabi in iyadu waa hooyadaa ah in ay jiri doonto qaar ka mid ah negotiables non. Waxay leedahay gabadh la iyada daawashada iyo sidoo kale annagaa leh haddii aan iyaga ha. Waxaan arkay qaar ka mid ah halkaas oo internet-ka in ay sheegtay in ay heshay in ay caanka ah inay ka qayb galaan .Waxaan kaniisad run ahaantii mahad 1.1.Six iyo Reach Records sababtoo ah waxaan lahaa wax maqli to.God y'all ammaana
Waxay u baahan tahay Ciise. Laakiin iyada u samayn in ay leedahay in noloshiisa isaga wax u siisid. Aadka u shakiday ahaan uu doonayo inuu kor ammaantiisuu doonaa inuu isaga u. Laakiinse hadday gabadh sameeyey wow waxa saamayn ayay ku yeelan karto waayo, boqortooyada.
Waxaan ahay baryo qeybiso iyadu ma. Waxaan oo dhan waa.
My fasiraadda shakhsi ahaaneed ee qeexidda erayga “qabow” ma farta Jay Z…. #SorryNotSorry
Trip Lee, inkastoo aan ku fikiray su'aalaha ay ahaayeen qaraabo iftiinka foomka farshaxanka of music ah, laakiin waxaa laga yaabaa waxaan xoogaa adag ahay. theses su'aalo, in my opinion aadan guriga eryi xirfad ay ka dhigaysa mid ah sida isagoo Masiixi ah (ugu yaraan waxaan qabaa waa iyada xirfad ku salaysan diinba iyada la St. John UMC).
More si gaar ah…Sidee wax raadayn kula tahay in aad music waa in nolosha iyo qiimaha gabdhaha yar yar iyo haweenka?
Trip eraygaygii wanaagsanaa. Waxaan mahad badan oo comments ka. Waxaa la dhiiri si ay u arkaan dadka Masiixiyiinta ah halis u maleynayaa iyo falgalaan waxa dhaqanka oo caan ah ayaa la soo qadimin. Jacaylka goobta Bro, tukanayay waayo, Ilaah in ay sii wadaan inay u duceeyaan adeegiddaada.
fududee Cole • January 29, 2014 at 9:59 pm • Reply
waxaan idinku leeyahay, waa waxa ay tahay. Waxaad xaq u leedahay in aad opinion u gaar ah. Sida aad ku tidhi,”aad labadaba waa Faasiqiin oo u baahan nimcada Ilaah ee”. Farqiga u yahay, aad u ogaato waxa Word wuxuu leeyahay iyo Beyonce ma. Duceeya lumay si ay u toobad keenaan oo jidadkoodii xumaa ka soo noqdaan. Tripp, sii shaqada wanaagsan iyo in ay Ciise Masiix la addeeci
su'aalo Good! Sida aan daawaday iyada dhawaan qaab Grammy, Waxaan ahaa niyad, iyo xumaatey. Sida aan ka fikiray, waxa ku saabsan, Waxaan bilaabay in ay ka xumahay iyada, maxaa yeelay, waxaan ogaaday, iyadu ma qariyeen by ninkeeda. jacaylka Real daboolida, ma ha cawradii naagtiisa loo soo bandhigin dunida.
EBER • January 29, 2014 at 10:51 pm • Reply
Waan jeclahay jidka ayaa sidan u qornaa. Su'aalo fiican oo lagu sameeyey jacaylka, walaalkiis si wanaagsan la sameeyey ! #dhiirigelinayaa
Su'aaluhu waa cajiib waxaan rajaynayaa maqashay waxa ku saabsan. Waxay yihiin su'aalo ku mudan oo daacad ah dad badan oo ku raaxaysan iyada farshaxanka leeyihiin.
kimeka • January 30, 2014 at 12:21 waxaan ahay • Reply
Waa hagaag ma aha inaad qof Khushuucsan aan akhriyay ku saabsan ku saabsan Bey bisha oo dhan. Waad ku mahadsan tahay dejinta this tusaale weyn.
Chelbia • January 30, 2014 at 5:34 waxaan ahay • Reply
Waxaan inay dhegaystaan ​​isticmaalo iyada, bcz aan codkeeda jeclahay! laakiin hadda music iyada oo dhammu tegey bcz gurigii iyada la dhiiri dhaqanka galmada, salaysayn khalkhalgelinta, iyo dabeecada caasi ah. Waxaa jira jinniyadooda sharka ka shaqeeya iyada Tababruhu in influance gabdhaha aadka u yar laga bilaabo. Its murugo Waxaan u baahanahay in aan gabadheyda ka ilaaliyo 5 sano jir ah oo haween ah oo aad u fiican iyo hibada oo jiray oo waa in ay ahaataa haween ah oo Ilaah, laakiinse haatan waxaa loo isticmaalaa, waayo, boqortooyada gudcur. Mararka qaarkood waxaan la yaabanahay haddii iyadu waa ogyahay ama ma? Waxaa laga yaabaa in oo u badan tahay iyada gudaha ayay si aad u wanaagsan in ay badiyay ogyahay… lakiin waxaan dareemayaa in ay tahay sida prisoner..there ah waa hab fudud ma soo baxay iyada… Kaliya Ciise offcourse! Barino mucjiso! Ilaah u ahaado mid raxmad badan iyadii!
Rachel • January 30, 2014 at 6:27 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan oggolahay inaan la Trip Lee, REEBO…. In uu wax badan oo qabow badan Jay-Z… Waxa kale oo dareen buu ku ahaan doonaa hooska qabow Ilaaha Qaadirka ah ka badan cadaabta kulul ;)
herblessedseeds Her • January 30, 2014 at 9:10 waxaan ahay • Reply
Waxaan mahad u doonaya inuu ku soo bilowdo wada hadal la Love oo rajaynaya in aad hesho qaar ka mid ah xukun iyo run ka isku hal mar ku wacdiyey Christian Beyoncé. wada hadalka waa in sii wado , iyo annagoo , Masiixiyiinta iyo qof kasta oo . Ma aha in aynu si qasbi runta , si fudud ku beeri . Sylvia Fanali herblessedseeds, on Facebook iyo Instagram
Vicki pizazzi • January 30, 2014 at 9:14 waxaan ahay • Reply
Waan jeclahay Trip Lee.
PJ • January 30, 2014 at 9:59 waxaan ahay • Reply
Wow! Tani waa mid laga cabsado! Si toos ah u barta, laakiin weli weli ixtiraam. Waan ogahay wax badan oo naga mid ah waxaa lagu wareersan sida in wixii ku dhacay Beyoncé aan Masiixiyiinta maleeyeen inay mar walba ha leeyihiin pass ah sababta oo ah iyada “iimaanka”.
Taniqua • January 30, 2014 at 11:53 waxaan ahay • Reply
su'aalaha aad iga dhigay feker sida aan u arkaan Beyonce. Waxaan u malaynayaa in iyadu ay aad u tayo leh. Waxaan ixtiraamaan iyada farsamada. Waxaan la yaabanahay sida ay uga jawaabi lahaa su'aalaha kuwa. Waxa ay noqon doontaa oo xiiso leh. dhibic weyn oo ku saabsan quruxsan ku xanuujiyo song. Waxay gabdhaha u sheegaya inaanay naftooda dilaan si ay u qummanaado, weli iyadu kulmay caadiga ah Caalamka oo kaamil ah….. Huuuum ka dhigaysa mid u malaynayaa.
i jeclaan su'aashaada questions.but 5 u muuqataa in mar aad hesho ee la soo dhaafay 40 aad eegto iyocadhadii qabow ama noqon qabow .Waxaan haka qabaa macneheedu malo macquul ah…si cad u
su'aalo Great, Trip! Oo anigu waxaan kaliya ku dhacay waxaa loo akhriyo sida qaar ka mid ah safar-Gurtida soo baxay on my playlist headset!
su'aalahaaga muujiyaan si qoto dheer, welwel dhab ah oo la dareen, iyo u muuqdaan in ay meel in daryeel iman. Laakiin sababta ay tahay in this qaraniga ahee xiddiga xataa akhri su'aalo aad kastoo, badan ka yar jawaabin? Well – aan ka eego dhinaca – iyadu waa, maxaa yeelay, idinku ma iyada wax weydiinaya aadan naftaada weydii!
Waa maxay caddeynta? Well, Waxaan dhageysto in ay hadda…”Waa waqtigii is-baaro, waxaan u baahanahay a is-baaro, waxa la joogaa wakhtigii loogu talagalay is-baaro, waxaan u baahanahay a is-baaro waxaa laga yaabaa in!”
waxaa Fiiri Beyonce! Waxaad sidoo kale, Jay-z! (Waxaa loo yaqaan Self Imtixaanka) :-)
Chinth • January 30, 2014 at 5:28 pm • Reply
Hey safarka, su'aalahaaga waa fudud, weli ku fikiray xanaajin. Waxaa yaridda in akhristaha dareen ah falanqaynta isku iyo sidoo kale, dareen ah mas'uuliyad in ay ku noolaadaan nolosheena istaahila in injiilka oo aan ka helnay oo maalin kasta ay qaataan, laakiin marnaba ma soo baxay meel of kibrin, laakiin mar walba ka mid ah Khashuue ah iyo jacayl. jeclahay. jeclahay. jeclahay. jacaylka saafi ah waa ka itaal badan qabriga. i siinin garanayo sababta ama waxa ay ka dhigeysaa Beyonce macaan sameeyaan waxyaalaha iyadu ma. laakiin waxaan ugu baaqay in ay jecel yihiin oo ay igaga cadhaysiiyeen jeclahay, oo aad u adeegtaan. oo i waydiinaya su'aalo qabaa in qaasatan arrimaha qalbiga ku wanaagsan yahay wadnaha ah. oo wanaagsan ayay ka cadhaysiiyaan ;)
waad ku mahadsan tahay jecel
p.s Jay z waa mid aad u qabow, waayo, nin dugsiga
Beytaniya • January 30, 2014 at 6:02 pm • Reply
I TGS odhan,shaqo wanaagsan on this article. sidaas used waxaan ahay dadka maqalka iyada uted,laakiin maqalka aad si dhab ah waydiinaya su'aalo dhab ah oo aan mararka qaar u maleeyaan oo ku saabsan marka aan arko. Waxaan ay aheyd mid run ma inuu wax akhriyo maqaalka maxaa yeelay, waan ku daalay kaliya dadka aad ayeey u. fikirrada Good.
si ay u tagaan • January 30, 2014 at 8:06 pm • Reply
Waxaad tahay sidaas u qalbi jilicsanaado ad nooc! jacaylka Ilaah noogu badan ee blog this. Ammaana aad ku turaanturoon!
Asne • January 30, 2014 at 10:00 pm • Reply
waa waxaan idinku leeyahay su'aalahan oo dhan waxay ahaayeen weyn marka laga reebo tiro ka mid ah 5( Waxaan arki tahay meesha aad ka imaanaya in kastoo, laakiin Jay-z ma aha qabow iyo defintely ma qabow badan qof ku nool, waayo, Rabbiga.). Waxa ay u muuqataa sidii aad defintely daryeelo hubin naagta. Ma doonayo in ay ku boodaan si ay gunaanad kasta, sidii lahayn ma aad la wadaago Injiil, iyada oo leh ka dib markii uu kuwa 4 u maleeyay in su'aalo iska xanaajin ugu horeysay. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan ku raacsan tahay Commenter kanuna(JONREAGAN) on blog this. Injiilka waa kaliya qalbiga / maskaxda ku Sarrifle. Waxa ay noqon doontaa weyn haddii ay taas maqleen qof(adiga oo kale) kaasoo sidoo kale ku lug music(inkasta oo aad labadaba ku jira waddooyin kala duwen iyo) oo la ogaado si qoto dheer ee waxaa saamayn. Trip ku mahadsan tahay rabitaanka in ay u adeegaan Eebahanno, waxa uu ku dhiirri-galinaysa in qof aniga oo kale ah kuwaas oo aad u dhiiran marka ay timaado dhiso xidhiidhyo dadka la wadaago iyo Injiil. Ilaah adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo!
Asne • January 30, 2014 at 10:21 pm • Reply
Sorry, Waxaan halmaamay in aan ku daro su'aal aan jeclaan lahaa in aad weydiiso. Wax weyn ayay ahaan lahayd, haddii aad iyada weydiisan kartaa: Waa maxay nooca music / lyrics Ma waxaad u rumaysatay waalidka waa in ay carruurtooda ka ilaaliyaan?
MichelleJ • January 31, 2014 at 12:57 waxaan ahay • Reply
Taasi waa hab fiican si aad u hesho rogid wadahadalka. Anigu shakhsi ahaan waxaan ahay taageere iyada qudhaydu, laakiin waxaan u arkaa in ay si xun u adag tahay in caaridi nool, barayay iyo kor u qaadida sida Ilaah doonayo sifooyinkii halka (si qarsoodi ah) arrimha dibada si ay kuwan raadkaygay iyada. Waxay ahayd halgan daqiiqad ah, gaar ahaan tan iyo markii aan ahay Houstonian walaalahooda ah AND alumna ah dugsiga fasalka iyada. Waxaan ku hareereysan, Waxaan ya sheegi!
Grace iyo TOD nabadda!
Asne • February 1, 2014 at 12:03 waxaan ahay • Reply
hi MichelleJ, waa mid aad u wanaagsan oo caafimaad qaba, ruuxa xigmadda lahaa in aad dareento convinction in aad nolosha marka ay timaado is burinaya. Waxaan kugu dhiirinaynaa in aad feverently baryayaaye in Rabbigu jecel yahay in si aad u maqashid iyada music qaada oo iska cad waa anti-Masiix siyaabo badan oo, okay Ma doonayo in ay sugarcoat, inta badan iyada music waa shayddaanka laakiin waa soo jiidasho leh. Waan ogahay in aan aan idiin sheego wax aadan horey u ogaato oo ku saabsan iyada music isagoo anti-Masiix, laakiin fadlan i maqal. Sidoo kale, aad u hesho qof(Mu'min shaqayn dabcan a) kuwa aad ku kalsoon karo si uu u qabto aad xisaabtamo iyo sharax / qiran aad halgan isaga ama iyada. Waxaan dhamaanteen leenahay halganka laga cabsado oo aad Rabbiga Fadligiisa in ay ka gudbaan halganka naga siin karaan.
P.S. Ma aha in la sababeeyo aad iyada oo dhageysaneysa music laakiin waxa uu ahaa fikir aad ee aan si ula kac ah u keeni ceeb Rabbiga iyo muuqaalba, raacsiiyana Dhagaysta hore ee dadka kuwaas oo raadinaya in aad tusaale u ah Masiixa. Sayidka Rabbiga ahu wuxuu idinla jiro.
Waxaan xaqiiqo ah qabtid su'aalo la mid ah. Qaar badan oo ka mid ah asxaabta aan fiirin ilaa Beyoncé taas oo run ahaantii i walwal badan. Waa wax laga xumaado in sexy waa waxa ay ku dadaalaya sidii ay sabab u saamayn iyada. Waxay sidoo kale la saaray haysa, sidaa darteed dadka qaarkood ay la mid tahay iyada oo si tayo leh, ayay samayn kartaa qalad ah ma… Miyeyna u fekeraan oo ku saabsan waxa ay ka leh iyo iyo sida in iyaga saamaysaa… sida ugu dhakhsaha badan ay maqli Beyoncé waxa walba oo wanaagsan, iyadoo aan loo eegin fariinta, taas oo ah mid aad u murugo leh. Sidaas haa, Aad ayaan ugu faraxsanahay Trip in la weydiinaya su'aalo kuwan ahay – iyada aadanaha sida dadka kale oo naga mid ah oo waa inay muraayad u ah oo ku saabsan waxa ay sameeya iyo kuwa iyadu ay saamaynta ugu badan ee Madaxweynaha Maraykanka… ayay warbaahinta kaliya sida ugu badan, haddii aan ka.
hey turaanturoon aad u ogaato #5 in ay ahayd alaabtii midig waxaa haaa!!!
sidoo Waxaan ku leeyahay aad heshay ku xuso illuminati ee sida ugu badan u keentaa saxaafaddu si xun ay dhabta ah, waxaa halkaas aad qabto si uu u daawado maragga dmx ee Masiixa iyo waxa illuminati ku sameeyey isaga la tan ku ogaado.
Waxaan aint leh j-z definately ayaa ku lug laakiin Rihanna oo isaga kama aanan khiyaameeyay oo aan ku lug oo dhan xoogaa in coincidental..
i jecel Beyonce iyada tayo ahu wuxuu siiyaa.. ay midhaha iyada ruux..
iyo sida ugu badan ee i jecel cabbay jacayl ( sida song shakhsi ka kii WAA INAY GAARKA UUN oo uma habboona inaannu aragno ) i ha dareemaan, iyadu waa cadaadis, i runtii samayn qabaa wax Rihanna oo dhan ayaa iyada iimaanka diisan, iyada aaminsan is, iyo iyada isku jecel yihiin in waa in aan oo dhan waxay leeyihiin qaar ka mid ah..
u baahan yahay annagoo baryadayada!! waad ku mahadsan tahay inuusan dooneynin inuu iyada weeraraan in su'aalahaaga, i mahad ruuxa quduuska ah oo aad maydhayeen xigmad halkii xukummadaada.. uu ku leeyahay in bible aan wax uma xukumi doono.. weli kiristaan ​​ugu this leeyihiin sidii ul jiis ah. qoyska aniga ii gaar ah waa sida tan.. aan aniga ku jiro.. iyo TAHAY TUSAALE LA MASIIXA! ilaah adiga iyo music barakeeyo, Wasaaradda xagga music iyo ilaah ha barakeeyo Beyonce waayo, iyadu waxay ku soo noqon doonaan AWOODDA EE SALAADDA waa ka itaal badan dharkiisa Shayaadiinta OF SIN!
Interesting laakiin qabow!
Chioma • February 3, 2014 at 7:05 waxaan ahay • Reply
Sidaas fiican yu of inaad iyada xukumi ama qarax iyada n #5 Waxaan knw yu're hab qabow badan Jay-z….
DaMarcus • February 5, 2014 at 7:47 waxaan ahay • Reply
Waan jeclahay oo waan hubaa oo arrintan ku saabsan mid ka mid ma ihi? Laakiin ma labadiinaba aad ku gabyeen ee kaniisadda ama soo ciyaareen door weyn ee kaniisadda? Waxaan qabaa waa in aad samayn. Waxaan idiin soo ducayno.
Kay • February 5, 2014 at 8:31 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay weydiinta su'aalaha in badan oo naga mid ah uu jeclaan lahaa in aad weydiisato. Tan aad leedahay madal inay sidaa sameeyaan, waxaan oo dhan aad ku faraxsantahay. Ilaah waa u roon, iyo sababta oo ah wakhtiga aad u soo bixiyey, oo aad mashquul jadwalka si aad u weydiiso su'aalo nooca kuwaas oo si aad u xirfad, bayaan wuxuu kuu abaalgudi doona. Sida aad ku xusan, waxaa laga yaabaa inaad dembi leh, sida aynu wada yihiin, laakiin haddii aad aqbalay Ciise sida Badbaadiyaha, aad, sayidow, hadda dambiile ah badbaaddeen nimco. Aamiin!
Aric • February 6, 2014 at 9:30 waxaan ahay • Reply
Waxaan qabaa in iyadu ay noqoto saamayn aad u xun, waayadan dambe, qof kasta oo tagaa badh qaawan masraxa u baahan yahay in dib looga fikiro waxa ay qabanayaan in xaaladda in. Waxaan ahay mid aad u kacsan iyadoo our Lady First waayo, ma taageeraya fannaaniin approiate more. Obama waa isku mid la taageeraya artist raabka seculier kuwaas oo kor u rabshadaha markuu ka dhanka ah in waa in!
tag • February 7, 2014 at 1:15 waxaan ahay • Reply
Waxaan ahay runtii greatful waayo sida aad duniyooyinka su'aalaha( Jidka None xukun ah) waa in laga cabsado. Hadda, naloo abuuray in ay Ilaah weelashii caabudo iyada oo ku nool nolol cibaadada (salaadda, akhriska iyo ka tarjumaysa on ereyga Ilaah, markhaati oo wax baraya kuwa kale ee jacaylka Ilaah iyo doonista iyaga u. Sidaas ogolaanaysaa u barya kuwa nagu wareegsan, in la arko iyada oo indhaha Ilaah oo aan isaga waafaqsanaynina inaad jidadkiisa dunida sida aan sidoo kale marag shaqada Ilaah.
Dulqaad • February 12, 2014 at 12:13 pm • Reply
Badan oo kids in aan dugsiga qaado aniga iyo waxaan ogahay in Beyonce bedeli kartaa in si Waxaan doonayaa inay saaxiib dhow ah iyo yimaadaan si aan dugsiga dadka ii sheeg in iyada iyo saaxiibo
Xitaa Ciise degay dembilayaal.
Waxaan ugu baaqay in ay Masiixa ku socotaan jacaylka iyo caawin dhan.
afar ah kuwa (su'aal 5 ayaa gudbay maskaxdayda at dhan, Waxaan qabaa inaad tahay qabow) su'aalaha kor xisaabo oo dhan 100 ka mid ah aan ku leeyahay for Beyonce.
keentaa • March 2, 2014 at 2:57 waxaan ahay • Reply
Just thinkin u xumad leh yall ayaa labadaba dembilayaasha raadinaya nimcada Ilaah. Waxay hubisaa in u dhaqmo sida iyadu iyo san yahay. Waxay heshay daawadayaasha aad u tiro badan n naf fududahay in la siiyo ilaa. Waxay had iyo jeer ka badan Jidka nolosha this kanuna waa wiilkeedii Jannada. Devil halkan iyo rumaysanahay ama aan macneheedu sida uu u shaqeeyo. Isagu ma doqon kaliya daraaddeed isagu waa Satin, laakiinse isagu uma uu aabbaha samaawi ah oo aan marnaba ka badan u siin kartaa ama u jeclahay in ka badan Ilaaha Qaadirka ah. Thanks
lahaa • March 11, 2014 at 4:01 pm • Reply
Waan jeclahay this post! Kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha weyn. Artists inta badan iloobaan ah oo ku saabsan saamaynta ay ku yeelanayaan dadka dhallinyarada ah, ama dadka ku nool guud, iyo ma ogsoona cadadka cadaadis iyo wax aan micne sabab u noqon kara kara.
Fadlan sii wadaan in ay oggolaadaan in Ilaah in aad isticmaasho iyo dhameysan shaqada uu bilaabay in aad. murtida.
P.S. Thanks for jawaabay su'aasha ku saabsan sababta aad u guursaday gabar caddaan…lol!
Tiffanie • April 3, 2014 at 9:55 waxaan ahay • Reply
article Awesome. Thanks for addeecitaanka, iyo wadaaga. adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo.
si aad u wanaagsan u saaray!
Julia suuxaan • October 14, 2014 at 10:08 waxaan ahay • Reply
Waaaaaaayyyyyy qabow badan JayZ. Waaaaaaaaaaayyyyyyyy.
Xusuuso: Pastor-Rapper Trip Lee Talks Calling Youth to 'Rise' oo u adeegi jiray si Taageerayaasha on Heerka a Personal (Video) - Social News Dashboard
Show Sex Live • July 29, 2019 at 2:18 pm • Reply
article aad u wanaagsan. dhab ahaantii waxaan jeclahay this
website. waxaa sii wad!